Mashquulka waddooyinka Hargaysa - BBC Somali
Mashquulka waddooyinka Hargaysa
19 Agoosto 2014
Image caption Baabuur maraya badhtamaha Hargaysa
Magaalada Hargeysa waxaa aad ugu soo batay gaadiidka siiba kuwa raaxada oo haatan waddooyinka magaaladu ay la ciirciirayaan.
Saxmada gaadiidka ayaa aad looga dareemayaa magaalada mararka qaarkoodna gadiidku intay isku bataan ayay saacado ku qaadataa in ay gaaraan meeshii ay magaalada uga socdeen.
Dadka magaalada ayaa wariyaha BBC ee Hargaysa u sheegay in arrintaasi ay sabab u tahay gaadiid raqiis ah ka yimaada Khaliijka Carabta, iyada oo maraakiibta Berbera ku soo xirta ay in badan oo ka mid ah baabuur keenaan.
Sarkaal ka tirsan boliiska taraafikada Somaliland ayaa sheegay in darawallada magaalada qaarkod ay caadaysteen isticmaalka wadooyinka mara badhtamaha magaalada.
Image caption ciriiri ama saxmad ayaa ka jira waddooyinka Hargaysa
Darawaladu waxa ay sheegeen in dhibaatadu ay tahay wado xumida taasina ay ku kalifayso in ay ka weecdaan kuwa dayactirka u baahan oo ay maraan kuwa cusub.
Xubin ka tirsan golaha deegaanka ee Hargaysa ayaa sheegay in aysan haynin dhaqaale ay ku dayactiraan wadooyinka magaalada, waxa uu intaas ku daray in wasaaradda arimaha guduhu ay ka jartay lacago ay ku kabi jirtay